You nwere ihe ndina n’elu akwa ma ọ bụ n’elu akwa? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ihi ụra na akwa - esi eme ihe
Ihi ụra na akwa - esi eme ihe
You nwere ihe ndina n’elu akwa ma ọ bụ n’elu akwa?
Ihi ụra n'ihe ndinapụtara n'ezie ịbụ n'imebedkpuchie n'okpuru akwụkwọ, agbanyeghị,Ihi ụranabedn'ụzọ ezi uche dị na ya pụtara ịtọgbọ nabedn’elu ya. ''Ihi ụra n’elu akwa', bụ ihe ziri ezi iji.
Achọrọ m ị dinara n'ihe ndina na Sọnde ọ bụla, dịka nke na-esote, belụsọ na nke ọzọ ga-ehi ụra na Sọnde, Mọnde, Tuesday, Wenezdee, Tọzdee, Fraịde, Satọdee, Sọnde, Mọnde n'isi ụtụtụ na-eme ka sayensị sayensị nwee ọganihu.
Ewezuga akụkụ ịrị elu. Naanị dinara ụra. Nke ahụ bụ ozi NASA na-agbasa na nyocha ọhụụ ya.
N'ihe dị ka afọ 2014, Drew Iwanicki sonyeere na nyocha nke NASA kwụrụ ụgwọ ya na isiokwu ya bụ Countermeasure and Testing Functional in Head-Down Tilt BedRest Study - edebiri dị ka CFT70. Sayensị kachasị mma na isiokwu. A ma ama Iwanicki kwụrụ $ 18,000 ka ọ dinara n’elu àkwà ruo ụbọchị 70.
A na-enyocha ya elekere elekere ma hapụ ya ịnọdụ ala na ikpere aka ya 30 nkeji oge ọ na-eri nri. Enweghị ụra, ọ dịghị ebili, ọ nweghị ebili n'ihi ihe ọ bụla, gbakwunye nlekota oge niile; ruo ọnwa abụọ na ọkara
Ọ na-ada ụda! Ọmụmụ ihe ahụ mere ka arụ ọrụ na-adịru ogologo oge na oghere na ndị a. Ndị nyocha NASA chọpụtara na mgbe ndị sonyere na-edina n’elu akwa ha na ụkwụ ha dịtụ elu, ihu ha zara aza na ọbara ha na - agagharị n’ụzọ dị iche - dịka ihe na - eme na njem mbara igwe. Ime nke a maka ụbọchị iri asaa kwesịrị ịkọwapụta otu ahụ si emegharị na njem ogologo oge.
Ikwesiri ịkpachara anya n'agbanyeghị n'ihi na ọtụtụ ihi ụra ụra nwere ike ọ gaghị abụ ihe kacha mma ezumike.
Ọbụna mgbe ị na-eri DNews, na-ehi ụra, ma ọ bụ na-agụ ogologo akwụkwọ, ahụ gị na-agagharị mgbe niile. Na-emegharị, gbanwee ọnọdụ, ma gbanwee ibu gị iji kpuchido anụ ahụ gị ka ọnya nrụgide. Mmetụta nrụgide, nke a na-akpọkwa ọnya afọ, na-eme mgbe anyị na-agbanweghị ibu anyị ma hapụ ka ọbara na-asọba na akpụkpọ anyị.
Y’oburu n’ichaa ya aru ogologo, o n’akpomoku ma nwuo. Mgbe ọnya ahụ ruru ogbo nke anọ, mmebi anụ ahụ nwere ike iru ọkpụkpụ. Izu oke ụra nwere ike imebi ahụ mmadụ nke ukwuu ma, n’ọnọdụ dị oke njọ, bute ọnwụ; Ọrịa nrụgide na-egbu ndị America 60,000 kwa afọ.
A na-azụ ndị nọọsụ ịkwaga ndị ọrịa kpọnwụrụ akpọnwụ kwa awa abụọ ọ bụla iji belata ọnya nrụgide, mana ọbụlagodi na ịleghara ọnya afọ, izu ike bed nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ụfọdụ ahụ. Nnyocha 2004 na akwụkwọ akụkọ Joint, Bone, Spine chọpụtara na ndị ọrịa nwere obere ihe mgbu ndị edere ka ha dinara ala nwere pacenti iri na asaa nwere ike ịlaghachi na mgbu na-adịghị ala ala. NA N’otu nnyocha e mere n’afọ 2008 nke akwụkwọ bụ́ Journal of Applied Physiology mere, ụmụ irighiri ụkwụ ha ka buuru, otu ụdị ihi ụra maka ụmụ oke, gosipụtara ihe ịrịba ama nke ịda mba mgbe nanị izu abụọ gachara.
N'ikpeazụ, na mgbakwunye na nsogbu nsogbu uche ha, ha malitere nrụgide obi dị elu. Nnyocha ndị ọzọ egosila na ụra ogologo ụra nwere ike ibute nchefu, mgbagwoju anya, nchekasị, na ike iku ume ma ọ bụ nsogbu ọbara. Ọbụna Hippocrates, onye a na-ahụta dịka nna nke ọgwụ Western, onye nwụrụ na 370 BC.
Chr ọnwụ eze! Iji mee ka o doo anya, sayensị adịghị ekwu na izu ụra dị njọ! Hippocrates ga-akwado ya maka obere ọrịa, na omume a na-aga n'ihu taa. Otu nnyocha e mere na Childrenlọ Ọgwụ Childrenmụaka nke Boston chọpụtara na ndị a gwọrọ ọgbaghara ma nye ohere ka ha zuru ike ụbụrụ karịa ndị na-emeghị. Obere sloth dị mma kwa oge! A hapụghị ụmụaka ahụ gbara izu ka ha gụọ, ederede, ma ọ bụ igwu egwu egwuregwu ọtụtụ ụbọchị! Iji weghachite ya, NASA na-enyocha izu ike akwa maka nyocha mbara igwe.
A ga-agwụcha ọmụmụ ihe CFT70 na Disemba 2015, mana ha nwere olile anya 'ịghọta ihe ọrụ ọrụ nwere ike ịmetụta site na mgbanwe na physiology n'oge njem mbara igwe ma mepee ihe mgbochi iji gbochie ma ọ bụ belata' mmebi nke usoro ihe ọmụmụ ndị a ogologo ụgbọ elu. gaa Mars ma ọ bụ n'ihu.
Enwere olile anya na ha gha amuta otutu aru, okpukpu na aru obi nke ndi ozo zuru oke. Hippocrates ga-adị mpako. ọ bụrụ na-amasị gị ịbanye miri emi n'ime sayensị nke mbara igwe.
Lelee ọhụụ ọhụrụ m TestTube Plus. N'oge na-adịbeghị anya, m zutere onye na-agụ kpakpando, Dr. Ian O'Neill, onye ji nnọkọ IZU na-ekwu banyere oghere ojii, oghere ọcha, wormholes na ụdị ndị ọzọ dị na mbara igwe.
TestTube Plus bu ihe omimi miri emi na sayensi. Nwere ike ịdenye aha ebe a ma ọ bụ na njikọ dị na nkọwa !! Ọ bụkwa pọdkastị dị na iTunes nke nwetagoro ezigbo nyocha!
Ọ dị mma ihi ụra n'elu ihe ndina?
Ọnọdụ ndị dị ka anaemia, pịnye ụdị ọrịa shuga abụọ, yana hypothyroidism nwere ike ime ka obi jụọ gị oyi. Ala-na-ehi ụranwere ike ime ka ị jụ oyi, yabụ ọ kacha mma izere ya. Ndị na-anaghị agagharị agagharị. Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịnọdụ ala ma ọ bụ ibili ọtọ,hie ụrairi abedkama.08.29.2019
Izizi, Achọrọ m ikele gị maka ịnọ ebe a. Nke a bụ Dr.
Jesse Broderson si Malama Chiropractic ebe a na nnukwu agwaetiti nke Hawaii na ya
Enwere m nnọọ ekele na ị nọ ebe a n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu maka isiokwu nke ihi ụra n'ala - Aka nri, ee. - Anyị chọrọ ịza ụfọdụ ajụjụ gị, mana ya na dọkịta, ya mere na ọ bụghị naanị okwu m. Mana anyị nwere ụfọdụ echiche maka ihi ụra n’elu ala.
Ọ dị mma ọ dị njọ Ihe ị nwere ike ime maka ya ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe dịịrị gị mma. - N'ezie, dị mma, daalụ maka ịnwe Mairn. Ọ na-atọ ụtọ ịnọnyere gị taa.
Nke ahụ bụ ajụjụ na-atọ ọchị mgbe ị jụrụ m nke a. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na ị kpọtụrụ ndị na-ege gị ntị oge ịmalitere banyere omume ihi ụra gị, sị n'ezie, 'Chei! Kedu ihe bụ nke a? 'Gịnị mere ị na-eme nke a?' Echere m na nke a bụ nnukwu ajụjụ ma enwere m obi ụtọ ịnọ ebe a ma na-ekwu maka ya. - Anyị na-ekele ya, n'aka. - Eeh, ee.- Tupu anyị ebido, otu n’ime ihe m chọrọ ịchikọtara gị bụ ihe mere anyị jiri hie ụra n’ala mbụ.
Echeghị m ya echiche n’ezie n’ihi na ọ bụ ihe dị ndụ na-eme. Unu maara na anyị na-eme njem ma na-agagharị ọtụtụ ihe ma na-akwagharị ihe ndina na akwa akwa bụ nnukwu ihe ma ọ nwere mbelata na ndụ anyị - N'ezie, ee. - Yabụ, anyị wedara ihe eji akwa ụra, anyị mechara mebie n'ezie site n'echiche nke ịpịpịa ya ma debe ya ma nwee ohere niile dị n'ụlọ anyị, mgbe anyị laghachiri na matraasi ọdịnala ọ dị ka adịghị mma na. - Nri. - Yabụ, anyị nọgidere na-ehi ụra n’ala, ịmara? Ọ bụrụ na ndị gị nọ ebe ahụ nwere mmasị na ụfọdụ n'ime uru ụra ala a bụ onye ọ bụla ma n'ezie onye ọ bụla dị iche, yabụ- Ee, n'ezie, nkwupụta m ga-etinye ebe a bụ na nke a ga-eme bụrụ ihe dịpụrụ adịpụ ma ịchọrọ ịrụ ọrụ na dọkịta.
Karịsịa mgbe nke a mechara na-akpata ihe mgbu n'ụzọ ụfọdụ. Maka unu, aru gi doro anya imeghari ya. Got mara gị ahụ.
Nke ahụ bụ ajụjụ nkịtị m na-ajụ n'ọfịs m. Kedu ihe nkpuchi kachasị mma? Kedu ihe bụ ohiri isi kachasị mma? Kedu ihe m kwesịrị ịbụ? hie ụra? Azịza m na-abụ mgbe niile, nke a bụ naanị site na echiche ma ọ bụ ahụmịhe nke onwe m, na ịchọrọ ịrahụ ụra n'elu ala. N'ihi na ị chọrọ n'ezie izere adụ ebupụta na sag na karịsịa mgbe ị na-edina na a matarasị nke na-sagging na otu akụkụ pops n'ime ma ọ bụ pụọ, ma ọ bụ ma eleghị anya ma mgbe ị na-a di na nwunye na unu abụọ tụgharịa n'ime metal ọnụ na ị maara otú ọ dị.
M na-abụkarị onye ofufe nke ala siri ike na ụdị ụfọdụ, ma ọ bụ ihe nchekwa ụfụfụ topper ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ. Adịghị m nnukwu onye ofufe nke ndị na-ehi ụra, ihe ndị dị ka nke ahụ n'ihi na ábụbà ahụ na-abanye n'ime omimi. Nke ahụ bụ iwu isi m mgbe niile.
Ma ọ bụ n'azụ gị ma ọ bụ n'akụkụ gị. Zere ihi ụra na afọ gị. Ohiri isi n'okpuru ikpere na ohiri isi olu.
Naanị m chọrọ igosi gị ihe atụ nke ezigbo ụra ma ọ bụ ezigbo izu ike. Kedu ihe ga-adị n'azụ gị. Ihe anyị ga-emere Mairn.
Dina n’elu azụ gị, Mairn. Wepu akpụkpọ ụkwụ gị. Enwere m ihe nkwado ebe a.
Weghachite ntutu gị azụ. Debe ya ka isi gị kpuchie ya wee lee ikpere ikpere. Gaa n'ihu ma tinye nke ahụ.
Echiche Na-akpata Sra Ihu Ofra N’ezie, ugbu a bụ oge anyị ji zuru ike, mee ka ihe dị ọhụrụ, ma rụzie ya. Iji mee nke a, ịkwesịrị itinye ahụ gị na mpụga, yana nhazi, nke mere na ahụ gị anaghị enwe nrụgide, ya bụ, nrụgide mgbali, mgbe ị na-ezu ike. Akwa ndị a dị naanị sentimita abụọ nke ohiri isi, mgbe ahụ ọ ga-abụrịrị plywood n'ebe ahụ.
Nwere ike ịnụ ya, ọ bụ ihu siri ike, ọ naghị adaba. Ọzọ kwa, ihe nile nke aru ayi bu
A na-ebu ubu anyị n’ibu site na ubu gị, mara mma nke ukwuu rue úkwù gị. Ọ bụrụ na ị nọ n’elu ala, ọ ga-agbada. Ha na-emepụta mmetụta dị egwu.
Ebe ogwu gi na adaba. Isi dị elu, a na-ebuli ụkwụ elu, ma ọ bụrụ na ị nwere ike iche n'echiche, na ala nke ọkpụkpụ azụ ahụ bụ akụkụ ahụ. A na-ekpughere nkwonkwo akwara a na ibu ụfọdụ, aka abụghị, nri? Mgbe a bịara n'itinye ahụ na ọnọdụ na-anọpụ iche maka mgbake kachasị mma, ndozi, imeghari, nke a bụ ya.
Ihi ụra n'azụ gị, ihu siri ike, anyị nwere nkwado n'okpuru gị, naanị m na-eji ohiri isi nkịtị m na-eji. Otu n'ime ndị contoured ebe nchekwa ụfụfụ ohiri isi na mgbe a ikpere ohiri isi. Nke a na - enyere aka iwepụ nsogbu nke lumbar na azụ ala.
Nke a ga-abụ ọnọdụ ihi ụra kacha anọpụ iche. Olee otú ọ na-adị Main? - zingtụnanya. - Amazing, ọ bụghị ya? - Ma ị mere akwa nke aka gị, ọ bụghị gị? Ọ ga-amasị m ịgafe ebe a - Mba, nke ahụ dị mma.
Ee, yabụ na anyị ji ihu a siri ike ma anyị n’ezie
Nwunye m, ọ rụrụ ọrụ maka chiropractor mere nke a ihe dị ka afọ 20 gara aga na ọ na-echeta nwoke a, na chiropractor gwara ya na ọ bụ ya mere akwa nke aka ya na nke ọma ọ wuru ikpo okwu, naanị ikpo okwu osisi abụọ site na anọ, tinye plywood na ihe mgbodo mgboko ma ihe ahu o sachara, o jee na ulo ahia ebe a na enye ya mpempe mmiri. Na ụfụfụ upholstery dị na njupụta dị iche iche. Echere m na ọ dị ka anụ ọhịa nke dị ka sentimita ise ma ọ bụ eze ma ọ bụ ihe ọ bụla o nyere n'iwu n'oge ahụ ma tinye ụfụfụ dị ukwuu wee tinye ihe nchekwa ụfụfụ nchekwa ya - Ya mere enweghị igbe mmiri? - Enweghị igbe mmiri, enweghị ihe ọ bụla.
Ma chee N'ezie m na-eme, ị mara
Ya mere, nke ahụ bụ ihe anyị mere. Anyị mechara nye iwu otu mpempe ụfụfụ upholstery nke anyị chọrọ, anyị nwetara eze wee tinye akwa mpempe ụfụfụ ụfụfụ n'elu nke ahụ bụ naanị ihe dị ka sentimita abụọ ma anyị tinyezie akwa ụfụfụ ma ọ bụ ihe nkpuchi akwa akwa. ya na nke ahụ nyere aka na okpomoku ma ọ bụ ya. Ihe nzuzu bụ na anyị nwere ihe ndina a ogologo afọ 14 ugbu a. - Chaị! Nke ahụ bụ ogologo oge maka akwa - nke ahụ bụ ogologo oge.
Anyị na-ewepụ ya ma na-ehicha ya oge ọ bụla, anyị na-ekpo ya, ihe ndị dị ka nke ahụ, mana anyị agbanyebeghị. Enweghị otu akụkụ ma ọ bụ nke ọzọ. Anyị mere nke ahụ ma ọ bụ akwa kachasị mma m nwetụrụla na ndị mụrụ m nwere Tempur-Pedic.
I nwere nọmba ụra. Ha enwetala ụra na ụkwụ maka afọ iri gara aga. Ana m aga ịnwale ihe ndina ha ma echere m, 'N'agbanyeghị nke ahụ, ọ gaghị ada n'ihe ndina m.' Igwe siri ike na ebe nchekwa ụfụfụ nchekwa - yabụ nke ahụ bụ ụzọ dị oke mma nke ịme ya.- Ee kpamkpam.- Gini ka anyị ga-agwa ha na ngwụcha ụbọchị? Ala ahụ ọ dị mma ka ọ dị njọ? - Echere m ọzọ ma ọ bụrụ na ọ na-enye ebe siri ike ọ bụ otu ihe, ma eleghị anya, ngọngọ nke m pụtara nghọta nke ahụ mmadụ na otu ibu na ike ndọda na ibu anyị si eme ka ahụ mmadụ metụta bụ mgbe ị nọ n’elu ala dị nro na imirikiti ibu ahụ gị sitere na ebe a ruo n'úkwù gị.
Ọ bụrụ na ọ dị nro dị nro mgbe ahụ ka nke ahụ niile ga-emikpu. Get nweta nsogbu hammoku. Ebe ụkwụ gị kwụ ọtọ, a ga-ebupụ isi gị na nke a ga-etinye nrụgide na nkwonkwo nke spain.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka naanị mmebi ahụ ma ọ bụ ọnọdụ na-adịghị mma, ọ bụ nnọpụiche, nkịtị. Ebe isi na-ebo ya aru. A na-ebunye ahụ elu site na úkwù.
Ma mgbe ahụ ihe na-eme bụ na ị na-niile hụrụ nke a. Ebe oganihu ma obu ike ndọda na-erughi onye ọ bụla You nweghị ike iguzo ọtọ. Anyị na-ekwu okwu maka ihi ụra n’elu ala, ị chọrọ ijide n’aka na ọ nwere ike ọ gaghị adabara maka ọkwa na ahụike dị iche iche a.
Mana n'ezie echiche bụ na ihi ụra n'elu ala ga-enye gị ohere ịchekwa usoro ahụ kwụ ọtọ. Echere m na ihe gị kwuru masịrị m. Otu esi agbanye na ụfụfụ ụfụfụ.
M ga-ekwu na mpempe akwụkwọ a nwere ike ịbụ ezigbo mgbanwe site na futonor gaa na ụfụfụ ụfụfụ ma ọ bụrụ na ị ga-emesị chọọ ịrụ ọrụ gị ruo ihe karịrị otu yoga pad na ahụ gị nwere ike ijikwa ya. Echere m na ị na-ekwu na ị na-eji ohiri isi iji kwado ikpere gị ma ọ bụ n'etiti ikpere gị na n'ezie, ọ bụrụ na ahụ gị nwere ike ijikwa ya, ị nwere mgbanwe na ọkpụkpụ azụ gị nwere ike ijikwa ya mgbe ahụ achọtara m ya nke ọma. - Otu n’ime ihe m masịrị gị nke ikwuru bụ ibu na ọbụnadị ibu ahụ niile, ma ọ bụrụ na ị na-enwe oke arọ, dị ka ubu gị ma ọ bụ n’úkwù gị ma ọ bụ na ubu gị, mgbe ahụ ị chọrọ ka ihe mee gbasaa nke ahụ ntakịrị.
Ọtụtụ mmadụ na-ajụ, sị, 'Gịnị bụ isi nri ohiri isi ndị a niile mgbe ị nọ n'ala? hie ụra? ”N’ihi na ị chọrọ ijide n’aka na ị ka nwere ike ịkwado onwe gị yana na ọ dị mfe ịpịkọta onwe gị na enweghị akwa mgbochi n’ụzọ. Ka nwere otu uru ahụ na- Ee. - Ee.- Ee, m tụrụ aro ugboro ole na ole ka ndị mmadụ hie ụra n’elu ala tupu mkparịta ụka a.
Ọ na-adịkwa otú ahụ mgbe ị na-eme njem ọtụtụ ma na-ejedebe n’ime ụlọ nkwari akụ ebe akwa ndị ahụ na-adịghị mma. Ọ dị m ka nke ọma, hie ụra n’ala, were ihe mkpuchi, tụgharịa ha n’ime ụzọ zuru ezu, tinye ha n’elu ala, hie ụra n’elu ala. Nwere ike ibili n'ụra na-esetịpụ nke a n'ihi isi ike nke ihu siri ike na-emegide ụdị ọnọdụ dara ada - ma ị maara na anyị na-eme 'Dị ka ihi ụra n'elu ụlọ nkwari akụ?' Ya mere, anyị doro anya n’ihi na ọ na-esiri anyị ike ịbanye n’ihe ndina. - Nri. - Ugbu a, m ga-ele anya na ndetu m ebe a.
Anyị enweela ụfọdụ ndị kwuru na ha buru oke ibu, nwee nnukwu ihe mgbu na-ehi ụra n'ala, ma ọ bụ bụrụ ndị na-ehi ụra n'akụkụ. Gịnị ka ị ga-agwa ndị a? - Ma eleghị anya, mgbe a mgbanwe, ma eleghị anya, sị a ute n'okpuru gị. Mgbe ụfọdụ ị maara futons ndị a, akụkụ atọ nke mpịachi futon na ha na-adịkarị ihe dị ka sentimita atọ n'obosara, m ga-asị mgbanwe na nke ahụ na mgbe ohiri isi ọnọdụ.
Kwado ohiri isi dị ogologo n'okpuru ikpere gị na n'agbata ikpere gị ka ị wee hie ụra n'akụkụ gị mgbe ị na-atụgharị ma na-atụgharị. Can nwere ike ịnwe ohiri isi n'etiti ikpere gị na ụfọdụ ibu na ohiri isi na echiche niile bụ ịrahụ ụra n'akụkụ gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwe nnukwu, ọ ga-ada ma ọ bụ pịchaa mma ubu ma ọ bụ ya bụ ihe ịchọrọ iji lezie anya nke. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ na-akpata ihe mgbu, soro dọkịta, chiropractor, onye na-agwọ ọrịa ahụ, ma ọ bụ onye nlekọta ahụike gị rụọ ọrụ maka gị dị ka a ga-asị na ihi ụra n’elu ala ekwesịghị ịbụ maka mmadụ niile.
Achọrọ m ichetara onye ọ bụla na ihi ụra n’elu ala apụtaghị na blanket ahụ dị n’ala. Anyị nọ n'ala osisi siri ike, anyị nwere dịka ụfụfụ nchekwa nke anụ ọhịa nke atọ na nke ahụ dị ezigbo mma, ọ nweghị ụzọ a ga-esi mee ya na ala osisi siri ike ma ọ bụrụ na ịchọrọ izere akwa ụra ma debe akwa dị mfe dị ka akwa akwa. Enwere m nke dị ihe dị ka sentimita isii na-agbagọ na ụzọ atọ dịka iwepu akwa bed - Kpomkwem. - Hazie ya maka onwe gị.
Ọzọkwa, soro onye maara ihe ha na-ekwu na-arụ ọrụ, onye nwere ike ijide n'aka na ị na-eme ihe ọma maka ahụike na ịkpụzi ahụ gị. - ra gị na-atọ m ụtọ, na mberede ụlọ ahụ nwere ike ibu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ buru ibu, pịa ya naanị mgbe ahụ ọ bụ nnukwu ụlọ.
Aga m amatị ​​aka ma na-eme yoga na ihe ndị ọzọ niile. - Kpomkwem. - Ọ bụ ihe ọchị.
Obi dị m ụtọ na unu na-ewere nke a ma na-anwale ya ma ọ bụrụ na ọ baara gị uru ọ na-atọ ụtọ. - Ma ọ bụ n’ezie chiropractor m, yabụ anaghị m akụ m azụ, ọ bụ? (ọchị) - Mba, mba, mba, echere m na ị dị mma ma ọ bụrụhaala na ị na-elekọta ahụ gị, na-ege ntị n'ihe ịrịba ama ịdọ aka na ntị ma yikarịrị ka ọ bụ ezi echiche ịhazigharị ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ihi ụra n'ala. Ọ bụ naanị ezi echiche ịkwado mgbanwe na agagharị na ọkpụkpụ azụ na agbanyeghị na nke ahụ kwesịrị inyere aka. - Achọrọ m ikele gị maka ịnọnyere anyị yana ịkekọrịta ndụmọdụ niile a.
Nwere olile anya na ị ga-enweta ego. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla maka Dr. Jesse mado ha na nkwupụta ndị dị n'okpuru.
Aga m etinye njikọ nke Malama Chiropractic na nkọwa dị n'okpuru. Ọ bụrụ na ị nọ n'agwaetiti ukwu lee ya. Ọ dị ezigbo mma ma enwere m ike ịhọrọ ya na ọ na-aga chiropractic nke mere na enwere m ezigbo obi ụtọ na m hụrụ Malama Chiropractic na Dr.
Nweta Jesse ka o nyere m aka na spain m ma hụ na ihe niile dị mma ma dị mma, yabụ lelee nke ahụ yana mgbe ahụ, nwee mgbasa ozi mmekọrịta iji zaghachi mgbe ndị mmadụ nọ - Ee anyị nọ na Instagram na Malama Chiropractic Anyị nwere Facebook akaụntụ ma ị nwere ike iru anyị.
Gaa ma ọ bụ webụsaịtị ma ọ bụ zitere m ozi ozugbo na DrBroderson@gmail.com - Okay, great. Anyị chọrọ ịkele gị nke ukwuu maka ịnọ ebe a, enwere m ekele maka inye anyị mkpịsị aka aka ma hụ na ị kwuru okwu n'okpuru.
Ọ bụrụ na ị debanyere aha, daalụ maka ịbanye na ezinụlọ, na-anabata. Lee gị n'isiokwu na-esonụ - Ọ dị mma, nwee anụrị - Daalụ. Daalụ DrThank Jesse. - N'ezie.
Dịkwa mma. - Okay bye. (egwu dị egwu)
Ihi ụra n’abalị ọ dị njọ?
Mgbe ụfọdụn'abalịna-enweghịhie ụrana-eme ka ike gwụ gị ma na-ewe iwe n'echi ya, mana ọ gaghị emerụ ahụ ike gị. Mgbe ọtụtụ ụra na-ehi ụra, mmetụta uche na-adịwanye njọ. Brainbụrụ gị ga-agbachi, na-eme ka o sie ike itinye uche na mkpebi.
Kedu ihe na-egbochi gị n'abalị Bro na-echebara ajụjụ miri emi echiche? Obi ụtọ tupu nnukwu njem? Ka ọ bụ nrụgide banyere ọrụ na-aga n'ihu, ule na-abịanụ, ma ọ bụ ememe ezinụlọ na-atụ ụjọ? Nye ọtụtụ ndị, nrụgide a na-adịru nwa oge ka a na-edozi ihe kpatara ya ngwa ngwa, mana gịnị ma ọ bụrụ na ihe na-eme ka ị mụrụ anya bụ nchekasị nke enweghị ụra? Zọ a yiri ka anaghị anyụ anyụ bụ isi ụra nke ehighị ụra nke ọma, nsogbu ụra ụra kachasịkarị n'ụwa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla nwere ike ịkpata ụra n'abalị mgbe ụfọdụ - onye na-enye anyị nsogbu, mgbu anụ ahụ, ma ọ bụ nchekasị mmụọ. Ihi ụra nke ukwuu dị ka jet lag nwere ike imebi elekere ndu gị ma mebie oge ihi ụra gị.
Mana maka ọtụtụ oge, ụra ụra anaghị adịte aka. A sị ka e kwuwe, ike ọgwụgwụ na-ejide anyị niile - ọnọdụ dịka ọrịa ọrịa iku ume, nsogbu eriri afọ na ọtụtụ ndị ọzọ nwere ike ime ka ike gwụ ike. Mgbe ehi ụra na-atụkọtakwa ọnụ, ime ụlọ ahụ nwere ike ịnwe mkpakọrịta na-ehi ụra, abalị na-atụ ụjọ, a na-echegbu ụra.
Obi siri gị ike, ụbụrụ gị na-adọpụ sistemụ nzaghachi nke nrụgide, na-ebute ahụ gị na ọgụ na-agba ọsọ ma ọ bụ kemịkal. Na steeti a, ụbụrụ na-achọ ihe egwu nwere ike ime, na-eme ka ọ ghara ikwe omume ileghara nkụda mmụọ dị nro ma ọ bụ mkpọtụ ọhụụ anya. Isi iyi nke ike na ụbụrụ anyị bụ ụbụrụ ụbụrụ, n’oge ụra na-edozi ahụ, metabolism anyị na-ebelata iji chekwaa glucose a maka oge iteta.
Ma ihe ọmụmụ PET na-egosi na adrenaline, nke na-egbochi ehighị ụra, na-agbakwa ngwa ngwa metabolism gị. Mgbe ha na-ehi ụra, ahụ ha na-arụ ọrụ oge ọrụ ma na-ere ọkụ ụbụrụ na-enye - na-enye glucose. Ihe mgbaàmà a nke ụra na-ehi ụra na-eme ka ụra na-atụghị anya n'ụra ike ọgwụgwụ, mgbagwoju anya, na nrụgide, nke na-amalite usoro a.
Ọ bụ ezie na ehighị ụra nke ọma na-edugakarị ọnwụ, usoro ọgwụ ya yiri nkụju mmụọ nke ndị nwere ịda mba na nchekasị. Onye ọ bụla n'ime ọnọdụ ndị a na-eme ka ohere ịnweta abụọ ndị ọzọ dịkwuo elu. Ọ dabara nke ọma, e nwere ụzọ isi kwụsị ọgbụgba ụra.
Ijikwa nrụgide na-eduga na Hyperarous bụ otu n'ime ọgwụgwọ anyị ghọtara nke ọma maka ehighị ụra, na ezigbo usoro ihi ụra nwere ike inyere gị aka ịnọgide na-enwe mmekọrịta ụra gị. Gbaa mbọ hụ na ụlọ ihi ụra gị gbara ọchịchịrị ma jụọ oyi nke ọma iji belata 'egwu' a na-atụfekarị ya. Jiri akwa gị naanị maka ihi ụra, ma ọ bụrụ na ahụ erughị ala, hapụ ụlọ ahụ ma jiri ike gwụ gị ike gụọ akwụkwọ, ịtụgharị uche, ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ.
Dezie metabolism gị site na ịtọpụ oge izu ike na ịmụrụ anya iji soro elekere nke ndu. Elekere a, ma ọ bụ ụda circadian, na-emetụtakwa ìhè, yabụ zere ọkụ na-enwu gbaa n'abalị iji gwa ahụ gị na oge ụra. Na mgbakwunye na omume ndị a, ụfọdụ ndị dọkịta na-ede ọgwụ iji nyere ụra aka, mana enweghị ọgwụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi nke ga-enyere aka n'ọnọdụ niile. Ngwunye ụra ihi ụra na-eri ihe na-eri ahụ nke ukwuu ma na-eduga na nkwụsị nke na-eme ka mgbaàmà ka njọ.
Otú ọ dị, tupu ị chọọ ọgwụgwọ, jide n'aka na ehighị ụra nke ọma bụ n'ezie ụra nke na-adịghị ehi ụra. Ihe dị ka 8% nke ndị ọrịa a chọpụtara na ehighị ụra nke ọma na-enwekarị nsogbu mkpụrụ ndụ ihe nketa a na-akpọkarị oge ụra ụra, ma ọ bụ DSPD. Ndị mmadụ na DSPD nwere ụda olu circadian nke pụtara ogologo oge karịa awa 24, nke pụtara na omume ihi ụra ha anaghịzi adaba oge ụra oge ochie.
Ya mere ka ha na agba mgba ihi ura n’oge a na-edina ura, obughi n’ihi nchekuru ka ukwuu. Ha nwee ohere, ha nwere ike ịlakpu ụra n’oge nke ha. Oge ụra anyị na iteta ụra bụ nlezianya siri ike, nke dịkwa mkpa maka ahụike na ahụike anyị.
Maka ebumnuche ndị a niile, ọ bara uru itinye oge na mbọ iji dozie oge ụra, mana gbalịa ịghara ida ụra ọ bụla.
Gini mere ị ga-ehi ụra naanị n'ihe ndina gị?
“Artificial ìhè ikpughe n'etiti mgbede na ogeanyịgaabedna-egbochi ịhapụ nkehie ụra- na-ebute melatonin homonụ, na-eme ka ịmụrụ anya ma gbanwee rhythms circadian na elekere ọzọ - na-eme ka o sie ike karịdaa n'ụra, ”Ka Dr.09.25.2016
♪ Bob na Brad, mmadụ abụọ a ma ama ♪♪ Physiotherapists na ịntanetị Hi - Ndewo ndị bekee, Abụ m Bob Schrupp, Physiotherapist - Bead Heineck, Physiotherapist - Anyị bụkwa ndị ọkachamara na physiotherap na onntanetị. - N'echiche anyị, n'ezie, Bob. - you na-ehi ụra n’akụkụ gị? - N'ezie. - Ihe ise ikwesiri ima.
You na-ehi ụra n’akụkụ gị? - Ntakịrị .- Ee, ana m ehi ụra ọtụtụ n'akụkụ m. Ihe ndị a bụ ihe m maara na m ga-eso gị kerịta ugbu a.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ọwa anyị, were biko biko wepụta nke abụọ iji denye aha. Anyị nwere akụkọ gbasara Healthnọgide Na-enwe Ahụ Ike, Ahụhụ Dị Mma, Mgbu Na-adịghị Mgbu, anyị na-ebugo ha kwa ụbọchị. Ọzọkwa, ịchọrọ ileta anyị na weebụsaịtị anyị.
Chei, ị rụrụ ọrụ gị ebe a enyi? - Yo, aga m enweta ya. - Gaa na bobandbrad.com n'ihi na anyị na-enyefe ihe mgbe niile.
Gaa na ebe inyefe. N'oge a anyị na-enyefe nkeji ole na ole. Ihe ndị a dị mma maka ijikwa mgbu.
Ọmarịcha ihe maka eriri dị na azụ elu na mpaghara ọnyà ebe ahụ. - Chọpụta. - You're na-aga ikwu tinye na nke ahụ? - Ọfọn, aga m ekwu ihe ma chee na ị na-eme nke ọma. - Ọ dị mma. - Achọghị m inye gị nsogbu. - can nwere ike ịchọta ya na Facebook, Bob na Brad.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị nke anyị dị mkpirikpi, gaa na Twitter na Instagram. Anyị nwere ụdị nke 60 nke usoro ihe omume anyị. - N'ebe ahụ ka ị na-aga. - Ya mere ka anyị bido, Brad.
Ọ bụrụ na ị nwere obi ụfụ, ihi ụra n'akụkụ aka nri gị nwere ike ime ka ọ ka njọ. Ọ bụ otu ihe ahụ maka ụdị nsogbu ọ bụla dị ka GERD, anyị na-ahụ ọtụtụ n'ime ya, ọrịa reflux nke gastroesophygeal - na ọ metụtara ike ndọda na etu afọ gị na nri si agafe. - Ọ na-adọta - ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na nke ahụ, ịchọrọ ịrahụ ụra n'akụkụ aka ekpe gị.
Ihi ụra n'akụkụ gị nwere ike ibute nsogbu ubu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-ehi ụra n'akụkụ na-adịghị anya na ya ma anyị egosila ya ọtụtụ oge. Ihe ichoro ime bu, oh ka m were otu n’ime ndi a, Brad. Ya mere ana m eme nke a kwa abalị.
Emere m ya n’abalị ụnyaahụ. Enwere m ohiri isi a na-atụfu ebe a, na mgbe ubu m na-afụ ụfụ, m na-eme ọwa ebe a, ọwa na-enweghị mgbu, ma ugbu a enwere m nrụgide nrụgide n'isi m na obi, mpaghara obi, obere na ubu m, na-eche na ubu a n'ezie ị nsogbu adịghị. Mgbe ahụ ị nwere ike ịchọrọ ịkwado, ikekwe ubu gị na-enye gị nsogbu - Ah, enwere m onye ọrịa nwere nsogbu ubu, ntụgharị, na m chọrọ ịkọwa otu esi eme ya. - Eeh, ma ịchọrọ iji ohiri isi abụọ mgbe ị nwere ubu ọnya n'ihi na ịchọrọ otu ebe a ma ịchọrọ ọzọ ebe a.
Ma ọ bụghị ya, ọ ga-adị ka nke a n'abalị niile na ọ ga-adị ka ọ ka njọ, ọ na-agbagọ n'ime. Ọtụtụ mmadụ na-ehi ụra na aka ha otu a mgbe ha na-enweghị ohiri isi, ya mere, ọ dị ọnụọgụ abụọ. Nọmba nke atọ: Olu mgbu.
Mgbe ị na-ehi ụra n'akụkụ gị ihe mgbaru ọsọ bụ mgbe niile idebe isi gị na etiti. Chọghị ya otu a ma ịchọghị ya n’ụzọ ahụ. Yabụ ọ bụrụ na inwere ohiri isi dị nro, dị ka ohiri isi ala ebe a, ị na-ehi ụra n'akụkụ gị ọbụlagodi na ịnwere di na nwunye, lee anya na isi dabara na oghere ojii ebe ahụ - dịka m nụrụ ka ọ na-ekwu tupu: Ọ bụrụ were ohiri isi ala, isi gi ga-ada.
Ma nwunye m nwere mmasị na ohiri isi ala n'ihi na ọ- Ọ nwere ike ime ya. - Ee, ọ na-akpụzi ya.
Anyị ga-egosi gị nhọrọ ọzọ ebe a: ụfụfụ ebe nchekwa. Nsogbu nke ụfụfụ ebe nchekwa, na Brad nwere otu ebe a, bụ na ha nwere ike gbadaa ma mepụta ụdị oghere n'ime ha, ma na-ekpo ọkụ. Enweghị ụzọ isi gbasaa okpomọkụ - O doro anya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ụfụfụ ebe nchekwa ọ na-arụ ọrụ nke ọma, nke ahụ dị mma, mana anyị ga-agwa gị gbasara uru na ọghọm niile ebe a, otu ihe anyị ga-ekwu : Ohiri isi bụ ihe onwe onye.
Mana na nyocha gị, anyị ga-ekwupụta ohiri isi ị nwere ike ịchọ ịlele n'ihi na ọ dị ọhụụ ma anyị na-atụ anya na ọ bụ agba ụlọ. Ya mere, leepra Ovation, ụlọ ọrụ matraasi anyị masịrị anyị, anyị arịọla ha maka ohiri isi afọ, ha mechara nweta, echere m na ha egeghị anyị ntị, ha mechara nweta ya. - Ọ dị mma, echere m na ha mere obere nyocha wee mepee na ị nweghị ike ime nke a n'otu ntabi anya - o were ha ogologo oge ijikọ ihe a ma ha mere ohiri isi na nku ya n'ime ya - yabụ ọ dị ka akwa akwa ha na nanị ihe ha mere bụ itiriri ohiri isi.
Enwekwara ohiri isi pere mpe. Echere m na ha nwere 77.- Ee, ma ọ bụghị 700.- Ọ bụ eziokwu, ha nwere mmasị na nọmba a asaa dị ka gị.- Ee, ọ dị mma, asaa zuru ezu Bob.
Nwere ike ghara ịga na-ezighị ezi na nọmba asaa.- Ihe mbụ anyị ga-ekwu ebe a: ị gaghị na-eche a feathers. Ha ga - asị na ọ nweghị nku ọ bụla n'ebe ahụ - Aka nri, n'ezie m ga - ewepụ ya ma were mkpịsị aka m ma ha ga - eche ya - Ọfọn, ịchọrọ igosi ya.
Were ya na igwefoto ntakịrị. - you nwere ike ịhụ nke ahụ, Liz? You chọrọ ka m lekwasị anya na ihu m Nke a bụ akụkụ m dị mma. Nke ahụ ga-atụ onye ọ bụla ụjọ.
ụzọ ụkwụ ugwu ugwu gbagọrọ agbagọ Oregon
Yabụ ebe a ka anyị nwere n’ama n’otu n’otu. - Olee otu ị si eme ya, Liz? - Ma mgbe ị mepere nke ahụ, ebe ahụ ka ọ dị. Oops Ọ dị m nwute - ị gaghị enwekwa ike ịnụ ábụ́bà ndị ahụ.
Ma ha n’eme ihe ha kwesiri ime. Ha na-enye nkwado na --- ha na-ekwekwa ka ikuku na-agafe n'etiti ohiri isi. - Ee, ezigbo mma, Brad.
Echere m na nke a ga-abụ otu ohiri isi gị na-enweghị oyi ma e wezụga ịdị jụụ n'ihi na ọ na-eme ka ikuku dịkwuo elu. Mụ na Brad ji ha mee ihe, echekwara m na obi dị anyị abụọ ike ikwenye na anyị hụrụ ha n'anya n'ezie, m mekwara otu ihe na ndị a dịka m jiri ihe ndina ahụ mee, yabụ na anyị nwere cubicle ma na ngwụcha izu a ejiri m ohiri isi dị iche .M chere na nke ahụ bụ nnukwu ohiri isi, mana ozugbo ị pụọ na ya wee laghachite, ị ghọtara otu o si dị mma n'ezie.
Ọ dị ka m ghara ịrahụ ụra nke ọma na ohiri isi m n'ime ụlọ. Ya mere, ọzọ anyị achọghịdị, Akpọrọ m aro ịkwado ọbụna ohiri isi n'ihi na ha bụ nke ndị mmadụ. Mana ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ ya n'okpuru, ha na-enye ndị na-ekiri Bob na Brad ego ha ga-ebelata, anyị ga-etinyekwa njikọ dị n'okpuru.
Anyị ga-ekwukwa ya n’ọdịnihu. Maka na enwere ụfọdụ ihe ndị ọzọ m chọrọ igosi. Ma, ọ bụ ihe craziest.
Ha mere ohiri isi nwere nku n’elu ya. - Ee, enweghị m ike ikwere ya. - Ma ọ dị ezigbo mma.
Ọ dị mma, ọnụ ọgụgụ anọ. Ọ bụrụ n’ịrarụ ụra n’akụkụ gị ka anyị kwuo na ị nwere nsogbu azụ, ma ọ bụ ikekwe, ịnweghị ọbụna azụ azụ, mana ị chọghị ịlaghachi azụ, mgbe m hiri ụra ebe a n’akụkụ m, azụ na-ata ntakịrị. Know mara, ọ bụghị ogologo.
Yabụ na ị nwere ike iwere akwa nhicha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere mgbu azụ, dịka mpịakọta nhicha ahụ, tinye ya ebe ahụ, ọ ga-enye m nkwado m aka azụ. Ọ na-agbadata ala kama ịda obere ụzọ.- N'ezie, anaghị m ehi ụra ogologo oge n'akụkụ m n'ihi na m nwere spondylolisthesis.
Azụ m dị ntakịrị nke ukwuu maka nnọpụiche. Enwere m ike ịgha ụgha n'akụkụ m maka 10, ma eleghị anya 15 nkeji, mgbe ahụ, m na-aga azụ m ma enwere m mmetụta ka mma. Yabụ, na nke a, agbanyeghị m ụra ọzọ, yabụ --- ị nwere ike ịgbanye mpempe akwụkwọ ma ọ bụ tụgharịa a towel ka ị ghara ichegbu onwe gị maka itinye nke ahụ.
Ma ugbu a, ọ nọ n'ọnọdụ n'agbanyeghị akụkụ ọ na-ehi ụra na ps, ma ị nwere ike ịkọ ma ọ bụ kee ya n'ọnọdụ, ihe ọ bụla ịchọrọ ime. Ha na-eme n’ezie, ha na-akpọ ha ụra ụra. - leepra na-apụta. McKenzie na-emechi ihe ma nwee nke ahụ.
Ha adịghị oke ọnụ. Ha na-efu $ 30 ma ọ bụ $ 40 m chere. - Ihe ozo bu: oburu na ukwu gi di otua ka ino n’onodu nwa ebu n’afọ, ebe a ka obo ụkwụ gha agbadata ma gha agbaghari gi anya n’azu, iji zere na inwere ike itinye ohiri isi n’etiti ukwu gi.
Na-eme ihe n'eziokwu Brad, M na-agbalị a ohiri isi, ọ bụ naanị na-ekpo ọkụ. Ya mere enwere m otu n'ime obere wedges ị nwere ike ịzụta ma tinye ya n'okpuru ya. - Oh, yabụ nke ahụ abụghị nnukwu - Ihe dị otú ahụ - Ee, ikpere ikpere ma ọ bụ - Ọfọn, amaghị m ihe m ga-akpọ ha, mana mgbatị mgbatị ma ọ bụ ihe yiri nke a. - Ee, ka anyị pụọ. - Odi mma, onu ogugu ise.
Ihi ụra n'akụkụ gị nwere ike ịka mma maka gị ma ọ bụrụ na ị na-etufu ụra ma ọ bụ na-ehi ụra. Echere m na ọtụtụ ndị mmadụ amatala nke ahụ. Echere m, ugboro ole ka ị nụtụrụla di gị ma ọ bụ nwunye gị? Amam na ọ mere m ya.
Ihu gi? - Tinye ohiri isi m, o tinyere ohiri isi m na-ehi ụra ma nwee ike iku ume n'ihi na ikuku na-abịa. (chuckles) Ọ bụrụ na ọ ga-eji ụfụfụ ebe nchekwa, agara m ala. Ma ee e, ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ị dina n'akụkụ gị, yabụ na ọ dị mma maka ihi ụra n'akụkụ gị.
Yabụ nke ahụ bụ ihe ịchọrọ izere.- Oh, achọrọ m otu ihe, ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu, ohiri isi ndị ahụ nwere nku ahụ? na ị gaghị enwe ike ịnụ ya, ha na-agbakọta n'ụzọ zuru oke ma ọ bụ ya mere na enweghị m ike ikwenye na ị gaghị enwe ike ịnụ nku a, nke bụ ihe ịtụnanya nye m, ị nwere ike ịpịpịa ya dị ka ohiri isi nkịtị wee gbụọ ya okpukpu abụọ gị n'akụkụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka mma. Nye ya gbalịa, yabụ --- jisie ike na ohiri isi gị. - Daalụ nke ukwuu.
Kedu ihe na-ehi ụra?
: idina ala onyebedkahie ụraỌ na-agakarịbedihe dị ka elekere 11:00.
Kedu ihe ọ pụtara n’elu akwa?
: n’elu mpempe akwụkwọ, blanket, na bedspread nke abedỌ dinara nabedogologo oge.
Gịnị mere m ji ehi ụra nke ọma karị ma ụlọ m dị ọcha?
Ọhụrụ Ikuku Na-eduga N’ịdị MmaSra: Imeghe windo ndị ahụ ma hapụ ikuku ọhụrụ ka ọ banyeụlọ gịnwekwara ike inyere gị akahie ụra.Dị ọchana oyi ikuku na-arụpụtaụra ka mmakarịa musty na ikuku ọkụ.
Kedu ihe kpatara na ị gaghị arụ ọrụ n’elu akwa gị?
Na-arụ ọrụsite nabedna-ebelata ogo ụra, nke na-ebelataọrụarụpụtaghị ihe, ogo ike, na ogo ndụ. Ijibedka oghere oghere putaraị na-na-ewetaọrụ gịnagịkabed, ma n’ụzọ nkịtị ma n’ụzọ ihe atụ.
Kedụ oge kacha mma iji hie ụra ma teta n'ụra?
O yikarịrị ka ndị mmadụ hà na-ehi ụra ụra n'akụkụ abụọ: n'etiti 1 elekere. na 3 elekere na n’agbata elekere abụọ nke ụtụtụ na elekere anọ nke mma nke kacha mmahie ụraị ga - enweta, o yikarịrị ka ị ga - enwe ụra ụra ehihie. Circadian rhythm na-ekwupụtakwa oge ị ga-ehi ụra na ụtụtụkuliendokwa.14 nke Dec 2019
Kedu ihe kpatara oge ihi ụra kacha mma si elekere iri nke abalị ruo elekere anọ nke ụtụtụ?
“Windo nke10 elekereka 4 am ukwuu n'ime correlates na isi akụkụ nke circadian rhythm nkehie ụramaka ọtụtụ ndị mmadụ. Mpio a nwere ike ịdị ebe ọ bụla n’agbata elekere iri n’abalị ruo elekere asatọ ma ọ bụ itoolu n’echi ya. N'ihi ya ịgbaso nke ahụ nwere ike inyere gị akahie ụrayana kwe ka ụda circadian rụọ ọrụ nke ọma.Bọchị 7 2020
Gịnị ka ọ pụtara ihi ụra n’elu akwa ahụ?
Ihi ụra n'àkwà ahụ ga-apụta ịnọ n'ime akwa (kpuchie ya n'okpuru akwa) 'agbanyeghị, Ihi ụra n'elu akwa ahụ pụtara ịtọgbọ n'elu akwa n'elu ya, abanyela n'ime ihe dị nsọ nke akwụkwọ Bekee. .
Kedu nke bụ akụkụ aka nri nke ihe ndina ahụ ihi ụra?
Di kwesịrị dinara n'akụkụ aka nri nke ihe ndina ya, nwunye kwesịrị ịdị n'akụkụ aka ekpe nke ihe ndina ya. Ọ bụrụ n ’ibili ọtụtụ ugboro kwa abalị, ịkwesịrị imeziwanye ọnọdụ ụra gị. N'ihi ya, ọ na - ebute ụra nke ọma, enweghị ụra na migraine. Ihi ụra na-akpata enweghị ike ịga ọrụ ma na-emetụta nrụpụta ọrụ.
Kedu mgbe ị na-ekwu n'ihe ndina ma ọ bụ n'ihe ndina?
Dị ka ọ na-adị, mmadụ ga-asị n'ihe ndina ya mgbe ha ga-ehi ụra. Mana tupu ihi ụra ma ọ bụ mgbe ị tetara, ị nwere ike ịsị: Ana m ehi ụra (n'ihe ndina) Anọ m n'ihe ndina na-agụ